ढोक्को सुर्ता : ह्याँती गर्ने कुरा - AahaSanchar
Home आहा बिचार ढोक्को सुर्ता : ह्याँती गर्ने कुरा
तमाँई हाम्रो समाजमा ढोक्को महत्व कम्ता छैन । यसमा अरु क्षेत्र जस्तो अनियमित्ता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार होला भनिकन कसैले पनि नचिताए हुन्छ । अरुवास्तो भया भन्नु तमाँई हाम्रो निम खर्रै छ तेइभइन नगरी कर्रै छ । यसलाई दानापानी र ओक्तो मूलास्तो आज बिर्सिया पनि भोली खाउँला भनिकन म्याँत थप्न पाइन्न क्यारै । यो लिन दिनमा साइत–सुइत, बेलाकुबेला, सन्चोबिसन्चो, छुतअछुत, थरीबिथरी, लिङलुङ्ङ र रातबिरात केइले बर्जो गर्दैन । तमाई हाम्रो ढोकलाई जोगाउन सकेनौं भने नइयाँ छाँउलीलाई ठूलो दुर्भिक्ष पर्लास्तो छ । जतात्त्तै पाइने सप्पैलाई चाइने ढोक्कको संरक्षण गर्न कसैको ध्यायन छैन । कोबेला विदेशपाई फस्किन्छ आँनी दुनिया हस्किन्छ ।
नेपाली भाषा साउभाषा हो । ढोकलाई दण्डवत, सेवाढोग, नमस्कार, जदौ, स्वस्ति, दर्सन, प्रणाम आदि खाइन्च भनिकन मख्ख नपर्नुहोला । दोस्रो भाषामा आयो भन्या बक्क पर्नुहुनेछ । तमाँइका कुरा फाल्यास्तो नहोई छ भन्नु कि छैन भन्नु जाने जोवलाई भन्नु पर्लास्तो छ । किन भन्दा तमाँई हामी घोप्टोपरी, शिर निवारी, दसऔँला जोरी दिन खाने मान्स हौँ । तमाँइको निदै खुल्याउ हुन्न छक्कालै हल्लीखल्ली गर्दै आइन्च । आज ताज्जा खाइने भो भनिकन चाच्चाँरी तमाँइको हात भाइर निकाल्यो । भुर्ताउ नमस्कार आउँत्यो ? मोनिङ प आउँछ भन्नु हुन्च । अब क्या जोर्नु, हुत्तुन तुत्तु ओछ्यान्नु मुत्तु भइकन हैरान । भोल्लिया दिन्नु मोनिङ मात्र होल्ला र ? आज्जैबाट टेर्लिङ गरेल्नु होला डेइङ र नाइटिङ आउन बेर छैन ।
तमाँइको राजनीतिक भाषामा ढोक्का नाउँहरू कति छ्न् । त्यसको ककारी नगर्नोस् किनकि लोकसेवा तयारी कर्तालाई बर्ता हुन सक्छ । देश गुनाऔं भेष कपाल गुनाऔं केश भा झै ह्याँ विविदता छ त्यसैमा चित्त बुजाउनु पर्ने हुन्छ । ख्याल गरेल्नु होला, ठाउँनुसार तमाँइको ढोक अखट्या र बिखट्या पनि हुनसक्छ । ढोक्का आसले तमाँइलाई मुखाभर पार्ला । हाम्रो ढोक खाने ख्वाउने सीप सद्या र सुपाच्य छ । यो जति खा पनि अपच्य हुँनै हुँन्न भन्नु हुन्च । पैला पैला दिनेउ पनि कैलै सकिदैन्त्यो । क्या फरक पर्यो अइचेल तमाँइले खाने ढोक्को अनिकाल पर्लास्तो लक्ष्क्षिण देखिन थाल्याउँछ । दैबै जानुन्, क्या कारणले त्यो भयाउ हो ? ढोक्का विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले भन्छन् ।
बेली आज जम्र्याउ नइयाँ रिवाजाले तमाँई हाम्रो ढोक्को अनिकाल पार्ने हो कि भनिकन सङ्का मात्र नभई त्यस्मा आ उपसर्ग झुर्रयाउँछ । मिक्सावटले सबैतिर जरा फैलाउ कुरा ता सप्पैलाई थाईछ । तर तमाँइको ढोकमा पनि त्यो मिस्सियो छ भन्नु हुन्च । आक्कल झुक्कल चिनारुबाट आपनि मिस्सिकन आउँछ । मिसावट भए पनि पचेइको थ्यो तर तमाँइलाई रिसावट हुँदा पच्चियाउँ पनि अपच्चे हुन्छ कि ? मलाई रोचक भयाउँ तमाँइलाई घोचक नहोई । तमाँइको साम्मुन्ने बाट्टैमा भेट्टिने दुईको भयङ्कर झक्रा पर्न सक्छ । एकजनाले गर्ला अर्कोले नगर्ला अनि नगर्नेले गर्नेलाई हपार्ला । इन्केस त्यो लफ्र्रा एक्ककान, दोक्कान हुँदै तीन कानमा पुग्यो भन्या….?
Previous post आहा सञ्चार साप्ताहिक रुकुम बर्ष ६, अंक २२, मंसिर १९ २०७५
Next post महिला हिंसा रोक्न सडक नाटक